I-Miniloft, i-pool ezinyaweni, ilungele umsebenzi nokuphumula
Manzanillo, Col., i-Mexico
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Kike
Isitayela esincane esinethezekile nesimanjemanje esincane endaweni ekhetheke kakhulu yaseManzanillo, eduze kakhulu nolwandle lwaseLa Audiencia, ethathwa njengebhishi elingcono kakhulu futhi eliphephe kunazo zonke eManzanillo, eligunyazwe ngokuthi "Ibhishi Elihlanzekile" yi-SEMRNAT, izakhiwo zesitayela saseMedithera kanye nomkhathi, pool esinqeni, sizungezwe entabeni imvelo ngakolunye uhlangothi kanti kolwandle ngakolunye, umoya umoya oqabulayo. Ukuze ube nokuthula kwengqondo, sisebenzisa izindinganiso eziqine kakhulu zokubulala amagciwane kanye nenhlanzeko ekubhukheni ngakunye.
Umzila wokufinyelela kalula, kufanelekile ukucacisa ukungabaza kwakho ngaphambi kokuba ubhukhe: Ibhishi laseLa Audiencia lithathwa njengelinye lamabhishi ahamba phambili eManzanillo futhi liqhele ngamamitha ngokoqobo ukuze uthole ukunethezeka, kuyancomeka ukuletha imoto njengoba kunezindlela ezimbili zokufika ogwini. Omunye udlula indawo yokupaka ihhotela (imizuzu emi-4 uhamba) kanti omunye uzozungeza ihhotela ngaphambili kanti ezinye izakhiwo ezi-5 (imizuzu engu-2 ngemoto) ifulethi liyisitayela esincane esincane, ikhishi lifakwe: isitofu sikagesi kuphela. 1 sikaphalafini, ezincane ikhofi imbiza konke okudingayo ukulungiselela ikhofi okuhle, blender, izibuko, amapuleti, izinkomishi, nezinkezo, izimfoloko abantu 4, ummese, ukhokho remover, efrijini ibha, uyithose pan nezinsiza ukulungiselela amaqanda, (noma ngabe yini oyithandayo) ekhishini incane kodwa sokusebenza.
Umbhede usendaweni esezingeni eliphezulu, usilingi wakuleyo ndawo uphansi ukuze umuntu omude akucabangele, kanti esitezi esingezansi kukhona umbhede kasofa wabantu ababili (ukulala ngokukhululeka, okungcono nge complexion mncane noma izingane), noma yikuphi engela efulethini echibini ngoba sise unyawo unika ngqo, kuba kokukhuluma kuwufanele ukuthi ichibi sengathi ingxenye yempahla, Nokho sabiwe ezinye Villas lendawo, nakuba esikhathini esiningi kuba wedwa.
Yonke ifenisha nomatilasi, amashidi masha, indawo isanda kulungiswa kabusha.
Uma kukhona okudingayo ikakhulukazi, ungazise ngokubonisana ukuze sibone ukuthi singakusekela kanjani.
Eduze kakhulu kuneklabhu yama-yachts, futhi kukhona imibono enemibono emihle yokuthatha izithombe ezinhle kakhulu, ngomzuzu ongu-1 sine "The audience beach", ezitolo ezinkulu eziyimizuzu eyi-10, amasinema, izindawo zokudlela ezinohlobo oluhlukile lokudla.
Eduze kakhulu neklabhu ye-yacht, ukubukwa okuhle nezindawo ezinhle zokuthatha izithombe ezinhle kakhulu, iminithi elingu-1 ukusuka ogwini, imizuzu eyi-10 ukusuka ezikhungweni zezitolo, amabha, icinema, izindawo zokudlela zazo zonke izinhlobo zokunambitha.
Siyatholakala futhi sizimisele ukusiza noma ukuxazulula noma yimiphi imibuzo.
Siyatholakala futhi silungele ukusiza noma ukuxazulula noma yimiphi imibuzo.